Maxkamadaha Puntland oo xukun dil ah ku ridaya dadka tahriibayaasha ku dhex tuura badda (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 10, 2013 4:53 b 0
Boosaaso, October 10, 2013 – Maxkamada derrajada koowaad ee gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta gaartay go?aan cusub oo lagula dhaqmi doono dadka tahriibayaasha ah, gaar ahaan kuwa ku eedaysan in ay badda ku dhex tuuraan dad nool xiliga tahriibka.
Go?aanka maxkamada ayaa lagu sheegay in uu yahay mid loo eegay dhinacyo badan, waxaana si cad loo sheegay in dil loogu lagu xukumi doono gebi ahaanba dadka ku eedaysan in ay falalka dilalka ah badda ka fuliyaan, weliba in la tuuro dadka tahriibka ah.
Maxkamada ayaa dhowaan xukun dil ah ku riday labba nin oo midkood lagu helay in uu ku tuuray gabar xeebaha u dhexeeya Yeman iyo Soomaaliya, doonta gabadhu saarnayd ayaa ka baxday xeebta Boosaaso.
Badda cas ee ?dhexaysa Yeman iyo Soomaaliya ayaa la sheegaa in ay markasta ku dhintaan dad tahriibayaal ah, kuwaas oo qaarkood si xoog ah badda loogu dhex tuuro.
Dhegeyso: Maxamuud Cabdi oo daljir ka tirsan ayaa gudoomiyaha Maxkamada gobolka Bari waraystay
Ra?isal wasaaraha Liibiya oo goor dhow la sii daayey xili saaka laga afduubtay hoygiisa Tripoli